Bernhard Langer တိုင်သူ့ Putter Anchoring သလဲ?
ဘယ်လို Bernhard Langer Anchor အတူ Away ရယူခြင်းလား? သူမဟုတ်
USGA အားဖြင့်ဆန်းစစ်နှင့်ရှင်းလင်း Langer ရဲ့ Post-anchoring-ပိတ်ပင်မှုချပြီးစတိုင်
သငျသညျအဘယ်သူ၏အလုပ်အကိုင်များရှည် putter နှင့်ကြောကျဆူးချပြီးစတိုင်တစ်ခု switch သည်အားဖြင့်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ရ၏ခဲ့ကြသည်ဂေါက်သီးကိုစဉ်းစားတဲ့အခါ, Bernhard Langer စိတ်ထဲမှကြွလာသောပထမအမည်ကိုဖြစ်နိုင်သည်။ အဆိုပါ yips နှင့်အတူရုန်းကန်နှစ်ပေါင်းများစွာပြီးနောက် Langer သည်သူ၏ sternum အားမိမိ broomstick anchoring အားဖြင့်အကောင်းတစ်ဦး putter ဖြစ်လာခဲ့သည်, သူသည်အနိုင်ရ - နှင့်အနိုင်ရနှင့်အချို့သောပိုပြီးအနိုင်ရ - ချန်ပီယံလိဂ်ခရီးစဉ်အပေါ်။
သို့သော်ထို့နောက်ဂေါက်သီးရဲ့အလောင်းတွေကိုအုပ်ချုပ်ခြင်း, USGA နဲ့ R & တစ်ဦး, တဦးတည်းရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဆန့်ကျင်ခြင်း, putter, သို့မဟုတ်အခြားဂေါက်သီးကလပ် anchoring ပိတ်ပင်ခဲ့။
အဲဒီပိတ်ပင်မှုဇန်နဝါရီလ 1, 2016 ရက်တွင်အကျိုးသက်ရောက်မှုသို့သွားလေ၏။
အဘယ်သို့ Langer ကြောင်းပိတ်ပင်မှုကိုင်တွယ်ခဲ့တာလဲ သူသည်အစဉ်ဒီတော့အနည်းငယ်ကွာသည်သူ၏ရင်ဘတ်မှသူ၏ putter များ၏ချုပ်ကိုင်ထား-အဆုံးပြောင်းရွေ့နှင့်အနိုင်ရပေါ်မှာ right ထားရှိမည်။ အကွာအဝေးကနေ, က Langer ရဲ့ Post-ပိတ်ပင်မှုချပြီးစတိုင်အားလုံးကိုမှာမဆိုခြားနားချက်ပြောပြရန်ခက်ခဲင်နှင့်စဉ်းစားဆင်ခြင်စရာအငြင်းပွားဖွယ်ရာဖြစ်စေခဲ့သည်။ သို့သော် Langer အထူးသသည်သူ၏ Post-ပိတ်ပင်မှုချဉ်းကပ်မှုနှင့်အတူမည်သည့်အမှား၏ USGA ခြင်းဖြင့်ရှင်းလင်းခဲ့သည်။
ဒါဟာ Langer, အသက် 58 မှာမှာတွေ့ခဲ့ရသောအခါခဲ့ 2016 မာစတာ ကျောက်ဆူးပိတ်ပင်မှုအကျိုးသက်ရောက်မှုသို့သွားလေ၏အနည်းငယ်လအကြာ, သုံးကျည်ပြီးနောက်သူ၏ရှည်လျားသော putter ၏ဆက်လက်အသုံးပြုခြင်းနှင့်ပထမဦးဆုံးရရှိခဲ့တဲ့သိပ်ကိုဆင်တူချပြီးစတိုင်ကြောင်း အဆိုပါမီးမောင်းထိုးများ၏တောက်ပ။ တချို့ကပရိတ်သတ်တွေပင်အချို့သောအခြားခရီးစဉ်အပြစ်တွေ, ဟေး, တစ်မိနစ်စောင့်ဆိုင်း, Langer ကြည့်ရှုခြင်းနှင့် said: သူနေဆဲ anchoring မဟုတ်လော
အဆိုပါ ဂေါက်ကွင်း၏စည်းကမ်းများ , ဇန်နဝါရီလ 1, 2016 ရက်တွင်ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်တစ်ဦးပါဝင်သည် လင့်ချရန်လေဖြတ်အပေါ်ပိတ်ပင်မှု , သေး Langer သူ Anchor ပိတ်ပင်မှုမတိုင်မီသုံးပြီးခဲ့သည်အတူတူ ol '' putter နှင့်လေဖြတ်ခြင်းသုံးစွဲဖို့ပေါ်ထွန်းရှိ၏။
နှင့်ယနေ့ Langer ကြောကျဆူးလေဖြတ်ဖြစ်အချို့ပေါ်လာဖို့အဘယ်အရာကို အသုံးပြု. အပေါ်ကိုလှိမ့်တတ်၏။
ကိုသတိရပါ: Long က Putters ပိတ်ပင်ခံရမ
ပထမဦးစွာရှည်လျား putters (နှင့်ဝမ်းအရှည် putters) က Anchor ပိတ်ပင်မှု (နေဖြင့်လုံးဝထိခိုက်ဖြစ်ကြောင်းသတိပြုပါ နည်းဥပဒေ 14-1b ) ။ အဲဒီစည်းမျဉ်းကိုသာကြောကျဆူးလေဖြတ်ပိတ်ပင်။ ဒါဟာအဘယ်သူမျှမသုံးစက်ကိရိယာများအပေါ်သမျှကိုအကျိုးသက်ရောက်ပါတယ်။
တစ်ဦးဂေါက်သီးရှည် putter သုံးပြီးစောင့်ရှောက်ရန်လိုလားပါလျှင်, ထိုဿုံအဆင်ပြေပါသည်။ သင်ရုံကကျောက်ချရပ်နားနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။
သို့သော် Langer တိုင်သူ့ Long က Putter Anchoring မဟုတ်လော
အဘယ်သူမျှမကသူမဟုတ်ဘူး - တဲ့အကွာအဝေးကနေအချို့မှထိုလမ်းပေါ်လာသောပင်လျှင်။
ဤတွင် Langer ရဲ့ Post-နည်းဥပဒေသည်သူ၏ရှည်လျားသော putter နှင့်အတူလုပ်ရိုးလုပ်စဉ်ချပြီး 14-1b ဖြစ်ပါသည်:
သူကဘောလုံးကိုကျော်နင်းရှေ့တော်၌မိမိအလေ့အကျင့်လေဖြတ်စဉ်အတွင်း putter anchors ။
အနည်းငယ်ကွာသည်သူ၏ရင်ဘတ်ကနေ - မိမိတာရှည် putter ၏တင်းပါးအဆုံးကိုင်ထားတ - သူဘောလုံးကိုကျော်လိုက်ပြီးတပြိုင်နက်, မိမိထိပ်တန်းလက်လှုံ့ဆော်ပေး။
ဒါပဲ။ မိမိအရင်ဘတ်ပယ်ကြောင်းထိပ်တန်းလက်ရယူခြင်း - နည်းဥပဒေ 14-1b ၏ဝါလိုအပ်ချက်များကို - တောင်သာအနည်းငယ်ပါလျှင်, သူ့ရှပ်အင်္ကျီများထည်ကွာသူ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲကနေရုံ smidge ကျသွားလျှင်ပင်ကကျောက်ချရပ်နားကြောင်း Langer ရဲ့လက်အကွာအဝေးကနေပေါ်လာပါစေခြင်းငှါ, ။
ငါအဖြေကိုစိတ်ကျေနပ်မှုမရနေသောစာဖတ်သူများရှိပါတယ်ငါသိ၏။ ကျွန်တော်နားလည်တယ်။ ရယ်စရာကြည့် - တချို့လူတွေကမှ - Langer တဦးတည်းကြောင်း, မိမိ Pre-anchor-ပိတ်ပင်မှုချပြီးစတိုင့်တစ်ဦးအလွန်အသေးအဖှဲညှိနှိုင်းမှုဖန်ဆင်းတော်မူပြီ။ fishy ကြည့်ရှုသည်။ မှားယွင်းနေကြည့်ရှုသည်။
ကျောက်ဆူးပိတ်ပင်မှုများအတွက်ပြင်ဆင်မှုမှာတော့ Langer putters နှင့်လေဖြတ်အများအပြားကွဲပြားခြားနားသောအမျိုးအစားများကိုကြိုးစားခဲ့သည်။ သူ Matt Kuchar ရဲ့, Langer ကပြောသည်ကြိုးစားခဲ့ လက်မောင်း-သော့ခတ်စတိုင် ; သူသည်အခြားအမှုအရာတို့တွင်တစ်ဦး crosshanded ချုပ်ကိုင်ပြီးလက်သည်းချုပ်ကိုင်နှင့်အတူသမားရိုးကျ-အရှည် putters ကြိုးစားခဲ့သည်။
စိတ်ကျေနပ်မှုမရ, Langer ရှည် putter မှပြန်လာသောပေမယ့် (ထိုကျောက်ဆူးအချက်ဖယ်ရှားခြင်း) မိမိရင်ဘတ်ချွတ်သည်မိမိလက်ကိုရုပ်သိမ်းများ၏အသေးစားညှိနှိုင်းမှုဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ သူကမကြာမီပြီးနောက် (ဖေဖော်ဝါရီလ 2016 အတွက် Chubb ဂန္ထဝင်မှာ) ချန်ပီယံလိဂ်ခရီးစဉ်အပေါ်အနိုင်ရရှိခဲ့သည်။
ထိုအ Langer ချန်ပီယံလိဂ်ခရီးစဉ်အရာရှိများနှင့် USGA အရာရှိများအနေဖြင့်အထူးသဖြင့်, သူချင်းဂေါက်သီးကနေပရိသတ်တွေထဲကနေ, ထိုပြိုင်ပွဲစဉ်နှင့်အောင်ပွဲပြီးနောက်စိစစ်အများကြီးရတယ်, နှင့်။
စည်းကမ်းများအရာရှိများ Langer သူလုပ်နေတာရဲ့အဘယ်အရာကိုသရုပ်ပြခဲ့ကြပြီ သူတို့ကျည်စဉ်အတွင်းသူ့ကိုခြေရာခံပါတယ်, သူတို့ကအကောင်းဆုံးဖြစ်နိုင်သမျှရူပလာပြီ, ဗီဒီယိုရိုက်ကူးစောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့်ထပ်တလဲလဲအတွက်ချဲ့ပါတယ်။ ထိုသူတို့ကစုံတွဲတစ်တွဲနှစ်သင်တန်းကိုကျော်ဒီအကြိမ်ပေါင်းများစွာအမှုကိုပြုပါတယ်။
ထိုသူတို့က Langer ပညတ်တရား၏အမှာစာကို, နည်းဥပဒေ 14-1b အားဖြင့်လိုက်နာကြောင်းကောက်ချက်ချပါတယ်။
ဒီတော့ Langer နေဆဲ anchoring ဖြစ်ပါတယ်တူသောကြောင့်ကြည့်လျှင်ပင် ... သူမဟုတ်ပါဘူး။
ရှင်ပေါလု Azinger: သူ့ဇီဝနှင့်ဂေါက်အလုပ်ရှာဖွေရေး
အဘယ်သူသည် Farted? ဒါဟာက Tiger Woods ခဲ့သလား
တစ်ဦးပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဂေါက်သီးရိုက်အားကစားသမားအဖြစ်က Tiger Woods '' ပွဲဦးထွက်
Ralph Guldahl: 3-အချိန်ဗိုလ်မှူး Winner ၏ဇီဝ
Michelle Wie စွဲမက်ဖွယ်ရာ Shots
မာကု O'Meara: တစ်ခုမှာဂရိတ်တစ်နှစ်တာဖြင့်ထိပ်ဆုံးတစ်ညီအလုပ်ရှာဖွေရေး
ဗိုလ်မှူးချန်ပီယံရှစ်အတွက်ဖီးလ် Mickelson ရဲ့နိုင်ပွဲများ
Bobby လော့ခ်: အဆိုပါဖြစ်ရိုးဖြစ်စဉ်မဟုတ်သောဂေါက်သီးရိုက်အားကစားသမား4ဖွင့်လှစ် Won ကဘယ်သူလဲ
က Tiger Woods '' Ethnicity ဆိုတာဘာလဲ သူကအဲဒါကို 'Cablinasian' 'ရဲ့ Says
ဤရွေ့ကားအလှအပကျူတိုရီရယ် Hilary မှားသွားတယ်
သန့်စင်သောသဲ Make လုပ်နည်း
Bridget ကဘိရှော့: ပထမဦးစွာလမ်စုန်းမ Execution, 1692
Wide ပွင့်လင်းတစ်ခုက 8-Ball ကိုစားပွဲတင်ချိုးရန်ကဘယ်လို
Phantom ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုများ 3
2013 ခုနှစ်၏ထိပ်တန်း 10 အမှတ်ရဖွယ်လုပ်ငန်းပေါ့ပ်သီချင်း Lyrics
အမျိုးအစားငါနှင့်အမျိုးအစား Hypothesis စမ်းသပ်ခြင်းအတွက် II ကိုအမှားအကြားခြားနားချက်
အနုပညာသမိုင်း 101 - Eraser ရဲ့မှတဆင့်ရေတွေလမ်းလျှောက်
ဒါကြောင့်စီးမျောလိုက်ပါသွားပါစို့ - Play လုပ်နည်း
တစ်ဦးကို Safe တောက်ပနေချော်ရည်မီးအိမ် Make လုပ်နည်း
အငြိမ်းစား - / အထဲကပယ်ကို ယူ. Remove မှ
သင့်ရဲ့ရုပ်ပြအဖိုးတန် Is လျှင်ထိပ်တန်းငါးခုနည်းလမ်းများကိုပြောပြပါရန်
အဘယ်အရာကိုလက်ဝါးကပ်တိုင်နိုင်ငံနှင်းလျှောစီး Wear မှ
"Pierre ၏ Menard, ကို 'Quixote' '၏အာဘော်" လေ့လာမှုလမ်းညွှန်
အရှေ့ Connecticut ပြည်နယ်တက္ကသိုလ်အဆင့်လက်ခံရေး
စာရင်းအင်းများတွင် Tally နှင့်အရေအတွက်
Impulse - အင်အားစုကျော်အချိန်
အဆိုပါအိုင်ဗီလိဂ်အဘို့အ GPA, SAT နှင့် ACT အဆင့်လက်ခံရေးဒေတာများ
Hang နှင့် Hung ကအသုံးပြုနည်းလိုက်တဲ့အခါ
Guru har ရိုင် (1630 - 1661)